पाँचकट्ठा जग्गा आमाको नाममा भएपछि छोराले आफ्नै आमालाई जङ्गल लगी ह’ त्या ? (भिडियो हेर्नुस) – Nep Stok
माघ २५, २०७८ मंगलबार 117
पछिल्लो समय हाम्रो देश नेपालमा ह’त्या’हिं’सा जस्ता जघन्य अ’प’रा’ध’का घ’ट’ना’हरुले च’रम सिमा पार गरिरहेका छन । यतिबेला आफ्नै घरभित्र नै ह’त्याहिं’सा’का घ’टनाहरु बढ्दै गएका छ्न ।
श्रीमानबाट श्रीमतीको ह”त्या, छोराले बाबुको ह”त्या अनि हुदाहुदा छोराबाट पनि आमा को ह”त्या, किन बन्दैछ यस्ता द”र्द”ना”क एवम ड”र”ला”ग्दा घ’टना पछिल्लो समय सामान्य ? आजको घ’टना पनि यस्तै प्र’कृतिको रहेको छ ।
मोरङ जिल्लाको पथ्री भन्ने ठाउमा एकदमै दु”ख”द एवम द”र्द”ना”क घ\_टना घ’टेको छ । जगमाया श्रेष्ठ नाम गरेकी एक आमा बिगत चार दिनदेखी ह”रा”इ”र”हेकी थिइन जुन कुरा उनको आफ्नै कान्छा छोरालाइ समेत थाहा हुदैन , कस्तो अ”च”म्म ! तर अझ बढी अ”च”म्मको कुरा त के छ भने चार दिनअगाडि उनै छोरा मर्निङ वाल्कको लागि निस्केको भनेर हातमा चप्पल बोकेर जङ्गलबाट ह”स्या” ङ”फ”स्याङ गर्दै निस्केको स्थानियले देखेका रहेछ्न ।
कहिले मर्निङ वाल्क नजाने मान्छे यसरी एक्कासी चारै बजे जङ्गलको बाटो मर्निङ वाल्क जानू, आमा चारदिनदेखी हराउनु र अहिले चारदिनपछी सोही जङ्गलमा एक मृ”त मान्छेको कं”का”ल भेट्टिनुको पछाडि केही न केही त र”ह”स्य पक्कै छ भन्ने कुरा हामी अनुमान पनि लगाउन सक्छौ । उनै छोरालाइ मर्निङ वाल्कबाट आउदै गर्दा उनको शरीरबाट मट्टीतेलको ग”न्ध आएको कुरा पनि स्थानियले बताएका छ्न ।
यहि मुद्दाको सुनुवाइ भएपछी आमा बे”प”त्ता थिइन तर आज अचानक जङ्गलमा एक ला”छ्को कं”का”ल भेटिएको छ र रातो चुराले यो कं”का”ल महिला कै रहेको प्रमाणित पनि गरेको छ । ला”छ पनि एकदमै न”ज”ला”इ”नु पर्ने ठाउमा ज’ला’इएको छ र अझैसम्म रातो चुराका टुक्राहरु स्पष्ट देखिएको गाउलेहरु बताउछ्न । यो ह’ त्या छोराले नै गरेको हुनुपर्ने सबैको राय छ र सबुत प्रमाण पनि उनको बि”रुद्ध मै रहेको छ ।
Prevअविवाहित लताको कुल सम्पत्ति ५० मिलियन अमेरिकी डलर, अब यो सम्पतिको मालिक को होला ?
Nextटिप्पर घर भित्रै छिरेर आगो तापीरहेका २ जना मान्छेको ज्या’न लियो (भिडियो हेर्नुहोस)